DAAWO: DF-Somalia oo si yaab leh uga hadashay Sarkaal ka tirsan ONLF oo la sheegay inay Itoobiya ku Wareejisay | Entertainment and News Site
Home » News » DAAWO: DF-Somalia oo si yaab leh uga hadashay Sarkaal ka tirsan ONLF oo la sheegay inay Itoobiya ku Wareejisay
DAAWO: DF-Somalia oo si yaab leh uga hadashay Sarkaal ka tirsan ONLF oo la sheegay inay Itoobiya ku Wareejisay
daajis.com:- Taliyaha Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka C/llaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) ayaa caawa sheegay in dowladda Soomaaliya ay sarkaal ONLF ah ku wareejisay Ethiopa.
C/kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, oo maalmahan ay dowladda ku haysay Muqdisho, ayaa ugu dambeyn loo dhiibay Ethiopia, sida laga gartay hadalka Sanbaloolshe.
Sanbaloolshe ayaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ka dhex galay mar arrintan waxa laga weydiiyey, isagoo xusay in arrintan ay tahay xasaasi, isla markaana waqtigeeda iyo goobteeda looga jawaabayo.
“Arrinka la xiriira Sarkaalka la sheegay inuu ONLF yahay ee dowladdu wareejisay sidaa la socotaan arrinkaas waa arrin xasaasi ah oo ay waqtigeeda iyo goobteeda looga jawaabo, aniga oo afduubaya dowladda waxaa jeclaan lahaa in arrintan aysan xilligan dowladda ka hadlin” ayuu yiri Taliyaha NISA oo af qabtay Ra’iisul Wasaaraha.
HALKAN KA DAAWO MUUQAAL TALIYAHA IYO RW. KHAYRE
Hadalka Sanbaloolshe ayaa yimid kadib laba maalin oo ay dowladda ku adkeysaneysay in Qalbi Dhagax uu gacanteeda ku jiro, mana cadda haddii markaas kadib la dhiibay, ama haddii maanta la dhiibay.